Taliyaha Booliska oo soo bandhigay 9 Baabuur oo ay u kala direen Goboladda dalka | Somaliland.Org
Taliyaha Booliska oo soo bandhigay 9 Baabuur oo ay u kala direen Goboladda dalka
November 17, 2012	Taliyaha Booliska Oo ka hadlay Murashax ka tirsan UMMADDA Oo Diin Cay lagu xidhay
Hargeysa (Somaliland.Org)-Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Gen. Cabdilaahi Fadal Iimaan, ayaa maanta shaaca ka qaaday sagaal baabuur oo cusub oo ay ugu tallo-galeen inay adeegsadaan qeybaha kala duwan ee Booliska goboladda dalka.
Taliyuhu wuxuu sidaasi ka sheegay xaflad lagu qabtay xarunta ciidanka birmadka booliska ee Magaaladda Hargeysa, waxaanu tilmaamay in sagaalkan baabuur ay ku hawl-geli doonaan Booliska Goboladda Salel, Awdal, Gabiley, Saaxil iyo laamaha ciidanka birmadka ee magaalooyinka Burco, Ceel afweyn iyo Ceerigaabo.
Gen. Cabdilaahi Fadal waxa uu sheegay in gaadiidkan loogu tallo-galay inay ku hawl-galaan Booliska gobolada ka fog caasimaddu xiliga doorashada deegaanka.
Taliyaha Boolisku waxa uu xusay in ciidanka boolisku ay kor u qaadeen feejignaantooda iyo adkaynta nabad-gelyada xiligan oo uu carabaabay inay doorashadii deegaanku dalka ka qabsoomayso toban maalmood ka dib.
Taliyaha Boolisku waxa kale oo uu beeniyay inay xidheen murashaxiin ka tirsan urur siyaasadeedka UMMADDA, waxaanu tilmaamay inaanay arrintaasi waxba ka jirin.
Taliyuhu wuxuu sheegay 31-kii bishii hore ayaa mid ka mid ah murashaxiinta UMMADDA ee Hargeysa lagu xidhay diin cay, waxaanu carabaabay inay Guddoomiyaha UMMADDA ka wada hadleen arrintaasi isla markaana maxkamadi xukuntay ka dibna la sii daayay.
Previous Post“Wasiirradu Xisbi bay ka tirsan yihiin, haddii ay meel kale u ololeeyaanna ayay Nusqaan nagu tahay”Next PostWasaaradda Diinta ku baaqday ilaalinta nabad-gelyadda xiliga doorashadda	Blog